Caalamka, 01 March 2018
Guterres: Xabad Joojinta Siiriya Hala Dhaqan-geliyo
Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in qaraarki xabad joojinta ahaa ee uu Golaha Ammaanka soo saaray uu kaliya micno sameyn doono haddii si rasmi ah loo dhaqan geliyo.
Golaha ammaanka ee Q.M. ayaa u ballansan 11 ka subaxnimo Jimcaha maanta inay cod u qaadaan qaraar 30 cisho oo xabbad joojin ah ka dhaqhan gelinaya magaalada ay colaaduhu ka socdaan ee Ghouta, si gar gaar bini’aadannimo loo gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan halkaasi.
Q.M. oo Xabbad Joojin Ku Baaqday Gudaha Siiriya
Xog-hayaha guud ee Q.M. António Guterres ayaa golaha ammaanka ka dalbanaya inuu meel mariyo 30 cisho oo xabbad joojin ah, gudaha Siiriya, si loo caawiyo 400,000 oo ruux oo ku xanniban bariga Ghouta, kaas oo sheegey inay dunidan ku ciqaaban yihiin.
Nolasha Haweenka Soomaalida Denmark oo la Dhaliiley
London: Dilal iyo Dhaawac Loo Geystay Wiilal Soomaali Ah
Xalay waxaa magaalada London lagu dilay labo wiil oo Soomaali ah, halka mid kalena si xun loogu dhaawacay. Dilalkan loo geysto dhalinyarada Soomaalida ayaa ah kuwo magaaladaas ku soo noqnoqday.
Maxkamada Caalamiga ah ee Caddaaladda ee ICJ, ayaa dhawaantan u dooratay in uu muddo seddax sano ah madaxweyne ka noqdo garsoore Soomaaliyeed, kaas oo lagu magacaabo Cabdul-Qawi Axmed Yuusuf.
Ciyaaraha Olombikada 2018 oo Si Rasmi ah u Furmey
Dalka Kuuriyada Koonfureed waxaa maanta ka furmay tartanka ciyaaraha Olombikada xilliga qaboobaha.
ICJ oo Madaxweyne u Dooratay Garsoore Soomaali ah.
Maxakamada Caalamiga ee Cadaalada ICJ ee magaalada Hague ayaa shalay madaxweyne u dooratay Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ah garsoore ka soo jeeda dalka Somalia. Dadka Soomaalida ee gudaha iyo dibadaba ayaa weyn u soo dhaweeyay doorashada garsoore Cabdulqawii, iyagoo sheegay inay magac iyo sharaf weynba u tahay dadka Soomaalida.